Beeline စက်ဘီးစီးအညွှန်း device ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: စူးစမ်းရှာဖွေသူများအဘို့အစိတ်ဖိစီးမှု-အခမဲ့ပျော်စရာ - သတင်း Rule
Beeline စက်ဘီးစီးအညွှန်း device ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: စူးစမ်းရှာဖွေသူများအဘို့အစိတ်ဖိစီးမှု-အခမဲ့ပျော်စရာ
ဒါဟာရှာဖွေရေးနှင့်အသိပညာအရှိဆုံးအကျိုးရှိစွာလမ်းကြောင်းထက်ပိုအရေးကြီးတယ်ဘယ်မှာ Non-GPS စနစ်မောင်းနှင် routing ကိုများအတွက်ကွာဟမှုရှိပါတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်.
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Beeline စက်ဘီးစီးအညွှန်း device ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: စူးစမ်းရှာဖွေသူများအဘို့အစိတ်ဖိစီးမှု-အခမဲ့ပျော်စရာ” Alastair Jardine ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 25 နိုဝင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2015 09.52 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ဒီသုံးသပ်ချက်ကိုအ Beeline ၏အစောပိုင်းအဆင့်ရှေ့ပြေးပုံစံနှင့်အတူကောက်ယူခဲ့သည်, တစ်ဦး Arduino ဘုတ်အဖွဲ့က powered. နောက်ဆုံးဟာ့ဒ်ဝဲနဲ့ app အတွက်တင်ပို့မှုကြောင့် သြဂုတ်လ 2016 မတူညီတဲ့ကြည့်ရှုမည်.
အဆိုပါ Beeline အမြဲတမ်းလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်၌သင်တို့ကိုထောက်ပြထားတဲ့မြှားအဘို့သင့်ကိုပုံမှန်အတိုင်းအလှည့်-by-အလှည့်လမ်းညွန် dumps တဲ့သံသရာအညွှန်းကိရိယာ.
တစ်ဦးက Kickstarter ကင်ပိန်းအဖြစ်စတင်, Beeline သင်တစ်ဦးကားထဲတွင်ရှိသည်မယ်လို့အဖြစ်အလှည့်-by-အလှည့် GPS စက်ပစ္စည်းမက, အစားကရိုးရိုးသင့်ရဲ့နောက်ဆုံးဦးတည်ရာ၏ညှနျကွားပြသထားတယ်. ဒါဟာရှိသင့်ရဲ့ nouse အသုံးပြု. ရသင်ပိုမိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးသည်. ၎င်း၏ဖန်တီးသူ "fuzzy အညွှန်းက" မခေါ်.
အဆိုပါ Beeline ရှေ့ပြေးပုံစံ, တစ်ဦးချိတ်ထားတဲ့စွမ်းအားဖြင့်ကာ Android ဖုန်းမှချိတ်ဆက်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါအယူအဆရိုးရှင်း. အဆိုပါ Beeline လေးလံသောရုတ်သိမ်းအများစုပြုပါရန်သင့်စမတ်ဖုန်းကိုအသုံးပြုသည်: သင် app ကိုစသင့်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးလမ်းဆုံး plug, နှင့်ညွှန်ကြားမှုနှင့်အကွာအဝေးထို့နောက်သင့်လက်ကိုင်ဖို့ငွေရှာပေးနေသည့် Beeline စက်ပစ္စည်းတွင်ပြသ.
နောက်ဆုံး app ကိုလည်းအမှတ်ထောကျပံ့မညျ, သင်အကြိုက်ဆုံးကော်ဖီဆိုင်မှတဆင့်ပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် routing ကိုခွင့်ပြု. ငါသည်တလှည့်ဖျားဘို့ကိုယူဒီ app ကိုသာတစ်ခုတည်းဦးတည်ရာ၏ညှနျကွား၌ငါ့ကိုထောက်ပြနိုင်.
သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာ၏ညှနျကွား၌မြှားအချက်များ. မျက်နှာပြင်တဝိုက် buttons display တွေနဲ့ options အကြားအကူးအပြောင်းလိမ့်မယ်, အဖြူရောင်ဖဲကြိုးအရှေ့ပြေးပုံစံ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်စဉ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ device ကိုသေးငယ်တဲ့အနက်ရောင် puck ဖြစ်ပါသည်, Bluetooth ကိုသုံးပြီးဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်. ဒါဟာလက်ကိုင်ပတ်ပတ်လည်ကိုခါးမှာခြိ, နှင့်သင့်ရာခရီးမှညှနျကွားခနှင့်အကွာအဝေးကိုပြသနေတဲ့သေးငယ်တဲ့မြို့ပတ်ရထားကို e-စက္ကူ display ကိုရှိပါတယ်.
ထိုသို့အသုံးပြုခြင်းက ပို. ပျော်စရာတစ်ခုအစဉ်အလာအလှည့်-by-အလှည့်ဂျီပီအက်စ်ကိရိယာကထက်; သူတို့တစ်တွေဆိုင်ကယ်ပေါ်အတန်ငယ်စိတ်ဖိစီးမှုများစေနိုင်ပါတယ်, အထူးသဖြင့်သံသရာ-unsympathetic လမ်းများမှတဆင့်နဲ့လုပ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်း. သူတို့ကထိရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. င်, ရှာဖွေစူးစမ်းမဟုတ်.
ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးလမ်းဆုံးမှာညွှန်ပြခြင်းအားဖြင့်, အ Beeline လွတ်လပ်မှုတစ်နည်းပေး. သင်သည်တာရှည်များအတွက်မှားယွင်းတဲ့ဦးတည်ဦးတည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေဒါကြောင့်ဒါဟာလုံလောက်တဲ့သွက်ခံစားရ. တစ်ဦးက GPS စက်ဘီးကွန်ပျူတာကို အသုံးပြု. သွားလာကြသောအခါကြောက်ရွံ့သောသဘောလည်းမရှိသေးသည် ဖြစ်. သင်သည်တစ်ခါတစ်ရံခံစားရ. သာဦးတည်ခြင်း၏တစ်ဘက်အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်သင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူ re-ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့သင်တွန်းအားပေးကြောင်း, သငျတို့သရာအရပျ၏တစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းသဘောပေးသည်.
တစ်ဦးအလှည့်-by-အလှည့်စက်ဘီးစီးကွန်ပျူတာနှင့်အတူအများကြီးကိုဖွင့်လွဲချော်ပွီး, ငါကနာကျင်မှုဖြစ်ခြင်းမှထေူနိုင်. သူတို့ဟာမကြာခဏသင်သင်တန်းကိုပယ်ပါတယ်, ပြီးတော့လမ်းကြောင်း recalculate ရန်သင့်အားမေးမြန်းအသိအမှတ်ပြုရန်ခဏတစ်ယူ. သင်ပြုပါရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်, သင်မကြာခဏရပ်တန့်နေတဲ့သံသရာမှဦးဆောင်တာအကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းပြောင်းရန်လွဲချော်င်, ကတက်ဖမ်းရန်စောင့်ဆိုင်း, ထို့နောက်နောက်တဖန်သွားတဲ့. ဒါဟာအဆင်မပြေင်.
၎င်း၏အဖုံးမှတဆင့်လက်ကိုင်ပေါ်သို့ Beeline ကလစ်များ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ဟာ့ဒ်ဝဲတစ်ခုမှာကောင်းတဲ့ရှုထောင့်က၎င်း၏အရွယ်အစားဖြစ်ပါသည် (ဒါကြောင့်သင်္ဘောများတစ်ချိန်က - ယခုအချိန်တွင်ကြောင့်တစ်ဦးပါဝင်သော MacGyver ကဲ့သို့ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့ Arduino တစ်ဦးကို USB ဘက်ထရီ). ဒါဟာအိတ်ကပ်ထဲမှာသိုထားရန်လုံလောက်သောသေးငယ်တဲ့င်, အိတ်တစ်ခုသို့မဟုတ် saddlebag. အပေါ်သင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ screen ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘက်ထရီဦးသေဆုံးကွောငျ့သငျသညျဖြစ်နိုင်အညွှန်းအဘို့သင့်စမတ်ဖုန်းကျော်အသုံးပြုချင်င်ကိရိယာဖြစ်ချင်ပါတယ်.
ကျန်ရစ်ခြင်းမရှိ bracket ကရှိရဲ့အဖြစ်ကချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် detaching လွယ်ကူသည်. အဆိုပါရှေ့ပြေးပုံစံသည်၎င်း၏အဖုံးဖို့ Beeline ချိတ်ဆက်ကြောင်းခိုင်မာသောရော်ဘာတီးဝိုင်းကနေတဆင့်တွင်ကျင်းပခဲ့သည်. ထိုလက်ကိုင်ပေါ်မှာကျင်းပရန်အသီးအသီးအခြားသို့ကျန်သေးသည်နှစ်ဦး. ဒါဟာ OK ကိုခံစားခဲ့ရ, ဒါကြောင့်တစ်နည်းနည်းလျော့ရဲရဲဖြစ်သကဲ့သို့ဒါပေမဲ့သနျ့နှင့်အတူလုပျနိုငျ. အဆိုပါအဖုံးတစ်အိတ်သို့မဟုတ်အိတ်ကပ်ထဲမှာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှန်တယ်နိုင်ပါတယ်.
အဆိုပါ Beeline £ 45 Kickstarter ကလက်ရှိရရှိနိုင်, နှင့်သြဂုတ်လများတွင်တင်ပို့ရန်မျှော်မှန်းထားသည် 2016. နောက်ဆုံးလက်လီ version ကိုပတ်ပတ်လည်£ 60 ကုန်ကျမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်.
ဒါဟာရှာဖွေရေးနှင့်အသိပညာအရှိဆုံးအကျိုးရှိစွာလမ်းကြောင်းထက်ပိုအရေးကြီးတယ်ဘယ်မှာ Non-GPS စနစ်မောင်းနှင် routing ကိုများအတွက်ကွာဟမှုရှိပါတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်. တောင်မှသူ့ရဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံပြည်နယ်, အ Beeline အသုံးပြုမှုမှပျော်စရာခဲ့သည်, ငါအစဉ်အလာအလှည့်-by-အလှည့်စနစ်ကထက်ကိုအသုံးပွုဖို့ကနည်းတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုများကိုတွေ့.
အဆိုပါအယူအဆမြို့ကြီးတွေမှာစီးနှင့်သူတို့တာပေါ့အကြမ်းဖျင်းဘယ်မှာသိသောသူတို့အဘို့သံကိုဖြစ်ပါတယ်, သို့မဟုတ်လမ်းကြောင်း en ပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချင်. ကျနော်တို့ device ကိုသြဂုတ်လအတွင်းတင်ပို့ခဲ့သည်တစ်ချိန်ကဟာ့ဒ်ဝဲတူအဘယ်အရာကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်.
အကောင်းအဆိုး: သေးငယ်သော, အလင်း, attach ရန်မလွယ်ကူ, ပိုပြီးစီးနင်းလွတ်လပ်ခွင့်, အဘယ်သူမျှမ Re-routing ကိုနှောင့်နှေး, သောကြောင့်, e-စက္ကူမျက်နှာပြင်၏ကောင်းသောဘက်ထရီသက်တမ်း (သီအိုရီ)
Cons: အစားဆင်ကန်းတောတိုးအောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်ထက်သင်၏ခေါင်းကိုသုံးပြီးလိုအပ်ပါတယ်, အများဆုံးအကျိုးရှိစွာလမ်းကြောင်းမယူစေခြင်းငှါ, ပေမယ့အပေါ်ဘာမှကျောထောက်နောက်ခံတစ်ဦးစွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်
Alastair Jardine, အပိုဒ်, ပေမယ့, စက်ဘီး, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ဂျီပီအက်စ်, Kickstarter က, အသက်နှင့်စတိုင်, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, နည်းပညာ
← Apple က TV ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: စတုတ္ထမျိုးဆက် streaming များ box ကိုအပြည့်အဝဖုတ်မဟုတ်ပါဘူး 30 နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူသားသမီးတို့အဘို့ခရစ္စမတ်ဆုလက်ဆောင်စိတ်ကူးများ →